Doorasho ka socota Pakistan - BBC Somali - Warar
Doorasho ka socota Pakistan
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 11 Mey, 2013, 09:44 GMT 12:44 SGA
Codayntii doorashada guud ee Pakistan ayaa socota kadib olole dad badan ay ku dhinteen qaraxyo awgeed.
Qaraxyada ayaa sii socda maanta oo ay doorshada bilaabatay. Boliiska Karachi ayaa sheegay in kow iyo toban qof ay dhinteen, afartan kalena ay dhaawacmeen qarax ka dhacay xafiiska xisbiga Awami National Party.
Ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay isxabadayn ka dhacday saldhig codbixin ee u dhow xuduuda Afganistan.
Dad badan ayaa ku dhaawacmay weerar kale oo ka dhacay Peshawar. Wariyaha BBC ayaa sheegay in dad badan ay codkooda dhiibanayaan inkastoo ay jirto qatar ka imaanaysa Taliban.